Fitsaboana valanaretina :: Mifamahofaho ny fahafaha-mividy fanafody eny amin’ny farmasia • AoRaha
Fitsaboana valanaretina Mifamahofaho ny fahafaha-mividy fanafody eny amin’ny farmasia
Nomen’ny Filankevitry ny minisitra, afak’omaly, alalana hivarotra mivantana an’ireo fanafody fitsaboana ny valanaretina Covid-19 ireo toerampivarotana fanafody na farmasia. Raha ny zava-misy sy valin-teny azo tamin’ny ankamaroan’ny farmasia teto andrenivohitra omaly anefa dia mitaky taratasim-panafody avy amin’ny mpitsabo hatrany ireo mpivarotra. Nohazavain’ny Dr Rakotoarivony Manitra, talen’ ny Fampiroboroboana ny fahasalamana ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka kosa fa « tena fanomezana alalana ny farmasia mba ho afaka mivarotra avy hatrany ny fanafody Covid-19 amin’ireo olona misy soritr’aretina tokoa no dikan’ny fepetra vaovao noraisin’ny Filankevitry ny minisitra farany teo iny ».
Ny fisorohana ny fampiasana fanafody amina zavatra hafa no amalian’ireo mpivarotra fanafody ny antony itakiandry zareo ny taratasy voasoratry ny mpitsabo ho an’ny marary. Manao fanadihadiana hatrany amin’ireo mpividy ihany koa ny farmasiana mba hahafahana manome torolalana amin’ ny fampiasana ny fanafody. Nomarihin’ireo mpitsabo sasany rahateo koa, etsy an-daniny, ny risika amin’ny fividianana fanafody tsy misy taratasin’ny dokotera eo amin’ny lafiny tsy fahazakana an’ilay vokatra.
Misy ihany ireo sokajimpanafody azon’ny mpivarotra homena ny mpanjifa na dia tsy misy taratasy avy amin’ny mpitsabo aza, toy ny fampitomboana ny hery fiarovana. « Tena tsy manome mihitsy kosa izahay, toy ny antibiotika, raha vao tsy misy ny taratasim-panafody avy amin’ny mpitsabo”, hoy ireo farmasiana.
Marihina fa ny Vitamine C sy ny Magné B6 ary ny Azytromicine no tena be mpitady, amin’izao fotoana izao.
Fanambin’ny tale jeneraly vaovao :: Manome toky hanao hazalambo an’ireo mpamotsy vola ny Samifin